Tsy fantatrao izay atao hoe Marketing | Martech Zone
Alahady, Jolay 27, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Efa nieritreritra be an'ilay teny ve ianao Marketing? Toy ny amin'ny teny maro, ny famaritana dia namboarina sy namboarina indray rehefa mandeha ny fotoana. Wikipedia dia manome izao famaritana izao:
Ny marketing dia dingana mitohy amin'ny fandrafetana sy fanatanterahana ny fifangaroan'ny varotra (Vokatra, Vidiny, Toerana, Fampiroboroboana matetika antsoina hoe 4 Ps) ho an'ny vokatra, serivisy na hevitra hamoronana fifanakalozana eo amin'ny tsirairay sy ny fikambanana. Wikipedia
Toa anao manokana ve? Niova ny marketing satria tsena niova. Rehefa nitombo ny tsena ary nifandray lavitra tamin'ny mpanjifa, ny mpivarotra dia tsy maintsy nanova ny fomba nivarotany ny vokatra.
Mampiasa katalaogy sy dokam-barotra amin'ny gazety… ary nahazo diplaoma tamin'ny dokambarotra fahitalavitra, ny tsena in tsenaing very.
Doc Searls niantso izay ataontsika Famaky amin'ny marketing eo amin'ny loha ao amin'ny toko nosoratany, Ny tsena dia resadresaka ao amin'ny Manifesto Cluetrain.
Ny olana amin'ny tsena vaovao dia ny lalana tokana, avy amin'ny "fandaminana ka hatramin'ny tsirairay". Hadinonay ny tena tsena.
Olona ny tsena, tsy mpanelanelana ny tsena. Ny marketing no fahaizanao mifandray amin'ny olona fa tsy ny fitaovana ampiasanao hifandraisana amin'izy ireo. Ny mpivarotra dia olona ihany koa, ary tsy maintsy mampiasa fitaovana na fomba rehetra azon'izy ireo ifandraisana amin'ny tsena.
Ny sary etsy ambony dia milay be. Tsy misy signage, tsy misy flyers, tsy misy teaser… na ny lokon'ny lay aza manavaka ny vokatrao. Olona fotsiny. Ny olona mifampiresaka. Olona mandehandeha mitondra vokatra eny an-tanana. Olona miresaka amin'ny orinasa. Tsy mahagaga raha mitombo ny tsenan'ny tantsaha isaky ny tanàna! Ny mpanjifanao dia maniry ny vokatrao na serivisinao, leo fotsiny izy ireo tsy afaka miresaka amin'iza na amin'iza! Tsy dia samy hafa be tamin'ny 100 taona lasa, sa tsy izany?
Ny marina dia hadinonao ny marketing is. Ny marketing dia tsy an'ny freakin P's 4 intsony. Mandray anjara amin'ny tsena ny marketing. Ny marketing dia tsy mametraka tranokala, mandefa fanambarana an-gazety vitsivitsy, manary whitepaper ary mandefa newsletter. Ny marketing dia mihaona amin'ireo mpanjifanao, na ny fomba fijerinao ny mpanjifa, ary mifampiresaka amin'izy ireo amin'ny fomba marina sy marina.
Raha tsy mifampiresaka ianao (tsy miresaka fotsiny izany dia mihaino ary mamaly) dia tsy marketing ianao. Raha tsy ekenao ny media sosialy toy ny bilaogy, tambajotra sosialy, finday (fifandraisana), horonan-tsary (fifandraisana) ary mailaka (serasera) ho anao Kilonga mpanelanelana, tsy marketing ianao.
Ny bilaogiko dia momba ny fampiasana teknolojia hanatsarana ny fahafahanao mifandray amin'ny tsenanao. Izany no mahatonga ahy manana lohahevitra sy rohy maro karazana - misy onjam-teknolojia vaovao manampy anao. Mipetraha ary mieritrereta momba ilay teny Marketing ary ny fomba niavian'io, fa tsy ny lasa.
Sary maoderina avy amin'ny tranokala San Rafael. Sarin'ny tsena 1908 avy amin'ny Bilaogin-tsary 100 taona.
Tags: AnalyticsFanamarinana ny marikaWordPress
27 Jul 2008 amin'ny 2:34 PM
Faly be aho fa nanoratra an'ity Douglas ity ianao! Miasa amin'ny varotra aho fa mahita ny tenako tsy miha mifanohitra amin'ny fomba fanatonana azy sy ny fomba heveriko fa tokony hisy.
Ny antony tiako ny media sosialy dia satria mampifandray sy mampifandray antsika indray amin'ny filantsika ara-tsosialy.
Ny marketing (ny fijerin'ny 4 p) dia tsy mandeha intsony toa ny taloha. Ny olona fotsiny dia tsy vonona ny holazaina sy mandefitra intsony, tsy natao hiaina toy izao mihitsy isika - biby ara-tsosialy isika!
Mety hisy ny hiady hevitra fa ny endrika niomerika dia tsy an'ny tena manokana ary tsy manasa ny fandraisan'anjaran 'tena-tany' fa mino aho fa marina ny mifanohitra amin'izay.
Arakaraka ny ianaranao, fiaraha-miasa, fandraisana anjara amin'ny tontolon'ny nomerika no mampitombo ny fanirianao hanao izany amin'ny 'olona tena izy.
28 Jul 2008 amin'ny 10:22 PM
Misaotra Lynn! Tena ankasitrahako ny fanehoan-kevitra ary misaotra anao tamin'ny fandokafana. Fotoana izao nanombohan'ny olona tena mino ny vokatra sy serivisiny - avy eo mora kokoa ny mivarotra ary tsy mila mihoa-pefy ianao.
28 Jul 2008 amin'ny 12:31 PM
Tsy afaka nifanaraka taminao kokoa Doug.
Etsy andaniny teny an-dalana, ny marketing dia nanomboka tamin'ny 'Big M' ka hatramin'ny 'Little M' tao an-tsain'ny olona. Izy io dia tsy mitovy amin'ny endrika fampiroboroboana fotsiny amin'ny fanamafisana ny fihodinana. Mbola hitantsika izany ankehitriny eo amin'ny tontolo politika misy ny asa hitazomana ireo kandidà ho 'hafatra'. Ireo rehetra ireo dia toa nanjary mpivarotra andiany iray izay mieritreritra ny atiny anatiny ary mifantoka amin'ny haavon'ny fahaiza-mamorona azy fotsiny hamakivakiana ireo korontana amin'ny serasera. Nahatonga fahasosorana goavana tamin'ireo mpitarika orinasa nitafatafa taminay momba ny bokinay eo alohan'ity… heverin'izy ireo ho toy ny ivontoerana mandositra fotsiny izay tsy mandray anjara firy amin'ny orinasa ary mila fehezina.
Mamely eto hatrany ny olana ianao. Io famaritana ny marketing io dia tsy mba izay nianarako fifehezana mihitsy. Amin'ny maha-izy azy, ny asa dia manan-danja kokoa sy manan-danja kokoa noho ny ankamaroan'ny manao azy… io dia ny asa 'fananganana fifandraisana tena misy sy lalina amin'izay omen'ny mpividy lanja indrindra'. Manomboka amin'ny fahatakarana ny zavatra ilain'izy ireo sy ny safidiny tanteraka izany, ka ny orinasanao dia miasa amin'ny fananganana vokatra tadiavin'ny olona hividy ary mifantoka amin'ny fomba marina hampitana ny antony mety hahaliana ny mpanjifa. Tsy ilaina ny miantsoantso hoe 'mividiana ny vokarako' (tsy misy mihaino intsony).… Ny fampiasana media sosialy sy endrika famoahana atiny hafa hametrahana fifandraisana dia mandaitra kokoa.
Mahaliana ahy ny isan'ny vondrom-piarahamonina mivelatra malalaka amin'ireo karazan-javatra ireo… indraindray sy toerana izay tsy noeritreretinay hatrizay teo amin'ny sehatry ny varotra. Misaotra ny eritreritrao sy ny asanao eto.
28 Jul 2008 amin'ny 10:21 PM
Tena tsapantsika fa mihemotra ara-potoana isika, sa tsy izany? Ary farany misy ny fiatraikany amin'ny olona manaparitaka ny filirany!